संक्रमित काठमाडौं : पाइला पाइलामा जोखिम « AayoMail
संक्रमित काठमाडौं : पाइला पाइलामा जोखिम
हिजो बिहीबार एकै दिन देशभरि ४ हजार ३ सय ६४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। यो हालसम्मकै उच्च हो।
योसँगै मुलुकमा कूल संक्रमित संख्या लगभग लाख नजिक पुगेको छ। बिहीबार नयाँ थपिएसँगै ९८ हजार ६ सय १७ संक्रमित पुगेका छन्।
यद्यपि, ७१ हजार ३ सय ४३ संक्रमित निको पनि भइसकेका छन्।
अघिल्लो दिन बुधबार पुष्टि भएका संक्रमितमध्ये २ हजार ५ सय ४० जना काठमाडौं उपत्यकाका हुन्। तीमध्ये पनि काठमाडौंमा मात्रै २ हजार ८५ जना संक्रमित थपिए।
काठमाडौं उपत्यकामा भाइरस संक्रमण दिनप्रतिदिन फैलिँदै गइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै भनाइमा उपत्यकाभित्र सबैभन्दा जोखिम काठमाडौंमा छ।
देशभरका संक्रमितमध्ये २६ हजार ६ सय ८४ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशभरका सक्रिय संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा रहेको बताए।
‘काठमाडौं उपत्यका भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा पुगिसकेको छ। भाइरसका सक्रिय संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६० प्रतिशत रहेका छन्,’ स्वास्थ्य प्रवक्ता गौतमले आयोमेलसँग भने, ‘यसले उपत्यका उच्च जोखिममा परेको प्रष्ट देखाउँछ।’
उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दै जाँदा आइसियु तथा भेन्टिलेटर अभाव हुन थालिसकेको छ।
देशभरका सक्रिय संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामै रहेकाले संघीय राजधानीमै पनि अस्पताल चहार्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ।
‘यहि दरमा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने अहिले भएका स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सक्दैन,’ गौतम भन्छन्, ‘कोरोनाबाट बच्ने एकमात्रै उपाय भनेको स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरी भौतिक दुरी कायम गर्ने र अतिआवश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कनु हो।’
संक्रमण निरन्तर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताल कोरोना भाइरस बिरामीका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको (नेपाल एपिएफ हस्पिटल) जस्ता अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल भनेर छुट्टयाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले उपत्यकामा संक्रमित संख्याको दर नघटे भयावह अवस्था आउने बताए।
अस्पतालमा बेडको चिन्ता
‘सास फेर्न गाह्रो भएमा वा बेहोसै हुनेजस्तो भएमा मात्रै अस्पताल आउनू,’ अस्ति बुधबार स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. गौतमले भने।
उनको यो भनाइलाई हाँसोमा उडाइए पनि उनको संकेत हो, ‘काठमाडौंका अस्पतालमा अब बेड भरिइसकेका छन्।’
‘दिनहुँ यसरी नै संक्रमित थपिँदै जाने तर समयमा डिस्चार्ज गर्न नसकिने हो भने झन् अप्ठ्यारो पर्नसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बेड अभाव देखिन थालिसकेको छ, सर्वसाधारण संयमित नहुने हो भने खतरा बढ्दै जान्छ।’
उपत्यकाको हकमा हेर्ने हो भने कोरोनाकै लागि भनेर छुट्टयाएका शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु, सशस्त्र प्रहरीे अस्पताल बलम्बु पूरै भरिएका छन्। त्यहाँ कुनै पनि बेड खाली छैन।
यसरी नै संक्रमण गति बढ्ने हो भने अस्पतालमा बिरामीलाई बेड नै नपाउने संकेत मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै सरकारी अस्पताललाई बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिएको र उपचार गरिरहेको गौतम बताउँछन्।
उनका अनुसार सबै सरकारी अस्पताल अहिले डेडिकेटेड अस्पताल हुन्।
मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई कूल बेड संख्याको २० प्रतिशत कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टयाउन निर्देशन दिएको छ।
‘निजी अस्पतालमध्ये कसैले संक्रमितका लागि २० प्र्रतिशत बेड छुट्टयाएका छन् भने कसैले छैनन्। मन्त्रालयले तोकेका धेरै निजी अस्पतालले २० प्रतिशतभन्दा बढी बेड पनि छुट्टयाएका छन्,’ उनी भन्छन्।
मन्त्रालयले कोरोनाका लागि भनेर काठमाडौं मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, जनमैत्री अस्पताल र सर्वाङ्ग अस्पताल लगायत छुट्टयाएको छ।
मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेका अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित राखेर उपचार गरिरहेको गौतम बताउँछन्।
उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि बेड, आइसियु तथा भेन्टिलेटर कमी हुने भन्दै डा. गौतमले मान्छेको नभई बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बताए।
हाल देशभर कोरोना उपचारका लागि भनेर निर्माण गरिएका २० हजार ७ सय ६५ डेडिकेटेड बेड छन् भने २० हजार ६ सय आइसियु बेड र ९ सय भेन्टिलेटर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौंमा कति आइसियु, कति भेन्टिलेटर?
मुलुकभर रहेका २० हजार ६ सय आइसियु र ९ सय भेन्टिलेटरमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ८१ आइसियु बेड र ७६ भेन्टिलेटर छन्।
तीमध्ये बिहीबारसम्म ८२ आइसियु र २७ भेन्टिलेटरमा संक्रमित ‘प्याक’ छन्।
‘कोरोना निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमितको नभई बिरामीको उपचार गर्ने हो। गम्भीर लक्षण देखिएका सिकिस्त बिरामीले मात्रै अस्पताल आउने र स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था हुन्छ,’ डा. गौतमले भने।
उपत्यकामा संक्रमण जोखिम बढिरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई बाहिरबाट उपत्यका नआउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भाइरस जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यो वर्षको दसैंलाई पनि साविककै स्थानमा मनाउन अपिल गरेका छन्। अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च छ। उपत्यका छाडेर जानेले पनि संक्रमण फैलाउन सक्छन्।
गौतमले संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णपालना गरी आवश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कनुको विकल्प नभएको भन्दै सबैलाई संयमता अपनाई जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्न आग्रह गरे।